Go’aamada Shirkii 2aad ee Golaha Dhexe Xisbiga Kulmiye | Somaliland.Org
Go’aamada Shirkii 2aad ee Golaha Dhexe Xisbiga Kulmiye
August 28, 2008	HIMILOOYINKA XISBIGA Xisbiga Kulmiye waxaa saldhig u ah:
U hawl-gelida xaqiijinta iyo taabbo-gelinta madax-bannaanida Jamhuuriyadda Somaliland iyo ka mid-noqosha da ururrada caalamiga ah iyadoo ah dawlad la aqoonsan yahay. Higsanayaa inuu dalkan Somaliland ka dhiso bulsho casri ah oo ka xor ah faqriga, jahliga, dulmiga, keli-talisnimda iyo guud ahaan maamul-xumada weji kasta oo ay leedahay.
Ku naalloonayaa yagleelidda bulsho dimuqraadi ah oo ay saldhig u yihiin mabaadiida talo-wadaagga ee ka soo jeeda dhaqankeenna suubban,diinteenna Islaamka ah iyo waayo-aragnimada ina anfacaysa ee aynnu ka soo dheegannay horumarka sayniska iyo teknoolajiyada bulshada caalamku ku tallaabsatay.
Ku hammiyayaa abuuridda bulsho nabdoon oo u hiilisa sinnaanta, is-xaqdhawrka iyo nabad-ku-wada-noolaanshaha ummadda Somaliland gaar ahaan iyo dadyawga gobolka iyo adduun-weynaha guud ahaan. Tiigsanayaa xaqiijinta bulsho ka dhiidhida addoonsiga weji kasta oo uu leeyahay iyo nooc kasta oo gumaysi ah, kana dheeraata yasidda, kala-faquuqidda iyo is-qabyaaladaynta. Shirkii 2nd ee Golaha Dhexe ee xisbiga Kulmiye oo ku qabsoomay magaalada Burco mudadii u dhacaysay August 23-26, 2008, wuxuu go’aamiyey dhamaan hawlihii uu u egmaday shir weynihii 2nd ee xisbigu sida,warbixin waxqabadkii Gudida Fulinta ee Xisbiga, Dastuurka Xisbiga, Barnaamij Siyaasadeedka Xisbiga iyo Xeer-Hoosaadka Golaha Dhexe ee Xisbiga.
Si uu u xaqiijiyo himilooyinka kor ku xusan marka uu ku guulaysto doorashooyinka dalka ku soo fool leh, Xisbiga Kulmiye wuxuu meel-marinayaa mabaadi’da talo wadaaga iyo xukun-qaybsiga ee hoos ku taxan?
Adeegsiga gole xukuumadeed oo kooban, tayana leh.
Hirgelinta hannaanka dimuqraadiga ah si waafaqsan diinta Islaamka.
Dhiirri-gelinta iyo ka midho-dhalinta nidaamka xisbiyada badan, u-tartanka xorta ah ee hoggaaminta dalka, adkaynta hay’adaha bulshada (civil society) iyo dadweynaha ka-qaybgalka talada dalka.
La-dagaallanka musuqmaasuqa, qaraaba kiilka iyo eexda oo ay dowaladda talada dalka haysa maantu xalaashatay.
Xoojinta is-ilaalinta iyo is-dheelli-tirka hay’adaha dawladda (checks and balances).
Meel-marinta madaxbannaynta garsoorka iyo horumarintiisa tayadiisa.
Dhiirri-gelinta iyo kobcinta saxaafad xor ah.
madaxbannaanynta iyo horumarinta warbaahinta dawladda, iyadoo la hoos geyn doono komishan madax-bannaan oo dejiya siyaasadda guud ee lagu dhaqayo warbaahinta.
Abuuridda xafiis madax bannaan ee xadgudub-eegaha (ombudsman) oo awood buuxda u leh qabashada cabashooyinka la xidhiidha ku-xadgudubka xuquuqda aasaasiga ah ee qofka, baadhistooda iyo tallaabo-ka-qaadistooda si waafaqsan xeerka.
Dhawridda xuquuqaha aasaasiga iyo xorriyadaha lagama maarmaanka ah ee habar-dad.
Meel-marinta iyo horumarinta xalliibnaanta iyo isla-xisaabtanka (transparency and accountability).
Xaqdhawridda iyo horumarinta ku-dhaqanka xeerka (respecting and promoting the rule of law).
Horumarinta, xaqdhawridda iyo u-hoggaansanaanta isticmaalka awoodaha cod-bixiyaha.
Abuuridda xafiiska Garyaqaanka Guud ee dawladda, dib-u-habaynta iyo horumarinta xafiiska Xeer-Ilaalinta Guud, daryeelka ciidanka qaranka, boliiska iyo ciidanka asluubta iyo ka-ilaalintooda ku-takrifalka awoodda (power abuse).
Xoojinta iyo horumarinta nidaamka xukun daadejinta (encouragement and development of decentralization).
U-kala xaqsooridda gobolada iyo degmooyinka Somaliland iyo isu dheelitirka qaybsiga khayraadka qaranka.
Dhiirri-gelinta wada jirka muwaadiniinta Somaliland iyo u xallinta khilaafaadka si nabddoon.
Dhiirri-gelinta deris-wanaagga iyo nabad-ku-wada-noolaanshaha dalalka dersika, kuwa mandaqadda iyo beesha caalamka.
Waxaa shirka lagu doortay:
Shir gudoonka Golaha Dhexe oo kala ah Jama Mohamed Shabeel, Gudoomiye, Mohamed Jama Warfa, Gudoomiye ku-xigeen iyo Abdirazak Jama Omer (Ciyaale), Xoghaye.
Waxaa kale oo shirka laga doortay Ahmed Mohamed Mohamud (Siilaanyo), Musharaxa Madaxweynaha dalka iyo Abdirrahman Abdillahi Wadaad (Siylici), Musharaxa Ku-xigeenka Madaxweynaha dalka. Waxaa la ansixiyey gudidii fulinta.
Shir labaadkii Golaha Dhexe ee Xisbiga Kulmiye oo lagu qabtay Magaalada Burco muddodii u dhaxaysay August 23-26, 2008 wuxuu cambaaraynayaa ku xadgudubka xuquuqda qofka, cago-jugleynta, xabsi-u-taxaabida, u-hanjabaada iyo cabsi gelinta ay dowaldu ku hayso bulshada Somaaliland. Wuxuu shirku ku baaqayaa in si degdeg ah loogu soo celiyo xoriyadoodii Abshir Hassan Hashi, Hersi Ali Haji Hassan, gudoomiye ku-xigeenkii hore a Komishanka doorashooinka, iyo wariyihii Universal TV Foosi Suleiman Aw biindhe ee laga dhex taaxaabay shirka iyo dhamaan dadka xaqdarrada iyo dulmiga ku xidhan.
Soomaaliland ha noolaato.
Kulmiye ha guulaysto.
Jama Mohamed Shabeel
Gudoomiyaha Golaha Dhexe, Xisbiga Kulmiye.
Abdirisack jama omer
Xoghayaha guud ee golaha dhexe ee xisbiga kulmiye